DAAWO:-Afar sanno oo kasoo wareegatay Qaraxii 14-kii Octoober ee Soobe – HORUFADHI MEDIA |
DAAWO:-Afar sanno oo kasoo wareegatay Qaraxii 14-kii Octoober ee Soobe
Maanta oo kale afar sano ka hor ayaa Magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho ka dhacay qaraxii weynaa ee gilgilay Isgoyska soobe 14-kii, October sanadkii 2017, ayna ku dhinteen boqolaal qof oo dad shacab ahaa.
Nin la socday gaari nooca xamuulka ee (TM-ka) loo yaqaano, lagana soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayaa isu qarxiyay Isgoyska soobe ee Magaalada Muqdisho, xilli laamaha ammaanka la sheegay inay gaarigaasi ku daba jooggeen.
Jugtii xooganeyd ee qaraxaasi ayaa laga maqlay gebi ahaan Magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho, iyadoo bulshada Soomaaliyeed si weyn u xusuusan tahay wixii maalintaa dhacay.
Tirakoob rasmi ah oo la sameeyay ayaa muujinaya in ay dhinteen in ka badan 500 oo ruux, isla markaana uu dhaawacyo kala duwan soo gaaray ku dhawaad 300 oo qof, halka la waayey ,dad gaaraya 54- oo illaa haddda aan la ogeyn meel ay ku dambeeyeen raq iyo ruux.
Qaraxaasi foosha xun ayaa waxaa marka laga yimaado khasaaraa nafeed ee soo gaaray dadka, ku burburiyey hanti lagu qiyaasay $6.3 Milyan oo isugu jirtay nuucyada adeegyada Ganacsiga, gawaari iyo dhismayaal.
SAWIRRO:-Guddoomiyaha G/Banaadir oo Arrimo muhiim ah kala hadlay World Bank
DAAWO:-Ciidamo farabadan oo duulan ku qaaday Guriceel iyo cabsi xoogan oo jirta